प्रदर्शन, तपाईंको हार्ड ड्राइव र भर्चुअल मेमोरी म म्याकबाट हुँ
1 EYE: म्याक OS X LION मा नगर्नुहोस्!
2 भर्चुअल मेमोरी असक्षम पार्नेका फाइदाहरू
EYE: म्याक OS X LION मा नगर्नुहोस्!
म जून २०११ मा यो पोस्ट लेख्न दु: खी छु, किनकि यदि मैले यो म्याक ओएस एक्स स्नो लेपर्डको रिलीजसँग पत्ता लगाएको भए मैले यस समयमा प्रयोग गरेको भन्दा चाँडो म्याकको आनन्द लिने थिएँ। र तपाईं पनि।
भर्चुअल मेमोरी असक्षम पार्नेका फाइदाहरू
म्याक ओएस एक्ससँग उत्कृष्ट बिल्ट-इन मेमोरी प्रबन्धक छ, तर यसले एसएसडी डिस्कमा मात्र यसको अधिकतम प्रदर्शनमा पुग्छ, त्यसैले यदि हामीसँग सामान्य हार्ड ड्राइभ र or वा बढी जीबीको रैम छ भने हामी धेरै समय खेर फालिरहेका छौं किनकि हाम्रो प्रणालीले गर्छ। छिटो काम नगर्नुहोस् जुन मैले गर्न सकें।
सबैभन्दा पहिले भन्नुहोस् कि यो गर्नको लागि म चार आवश्यकताहरूलाई मौलिक मान्दछु: पहिलो भनेको छिमेकीलाई कल नगरी कसरी म्याकको साथ सम्झौतापूर्ण परिस्थितिबाट बाहिर निस्कने भन्ने जान्नु हो, दोस्रोमा or वा बढी GB को र्याम हुनुपर्दछ, तेस्रोसँग नान- SSD हार्ड ड्राइभ हुनुपर्दछ र चौथो हिउँ चितुवामा हुनुपर्दछ। यदि तपाईं चार आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुन्न भने राम्रो गर्नुहोस्।
के हामी गर्न गइरहेका छौं धेरै सरल छ: हामी भर्चुअल मेमोरी असक्षम पार्छौं र प्रणाली यसको सबै अपरेसनहरू र्याममा प्रदर्शन गर्न बाध्य हुनेछ, जुन हाम्रो हार्ड डिस्क भन्दा असीमित छिटो छ। यस्तो लाग्छ कि हामी म्याकलाई क्र्यासमा जाँदैछौं, तर मैले यसलाई दिनको लागि जाँच गर्दैछु र म भन्न सक्छु कि अरु सुविधाहरूको अलावा अनुप्रयोगहरू धेरै छिटो खोल्दछन्।
तपाईंले टर्मिनल प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र यी आदेशहरू टाइप गर्नुपर्नेछ:
सूडो प्रक्षेपण अनलोड -w / प्रणाली / लाइब्रेरी / LaunchDaemons/com.apple.dynamic_pager.plist
sudo आरएम / निजी / var / vm / swapfile *
अब तपाईंले भर्खरै पुनःस्टार्ट गर्नु पर्छ र आफ्नै परीक्षणहरू गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईं भर्चुअल मेमोरी पुन: सक्षम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले पहिलो आदेश प्रयोग गर्नुपर्नेछ तर "लोड" को साथ "अनलोड" गर्नुहोस्। तर म तिमीलाई भन्छु, यो एक साँचो उपको रूपमा मेरो लागि काम गर्दछ।
अद्यावधिक गर्नुहोस्: तपाईंले टिप्पणीमा यकिन गर्नुभयो, यो शेरमा काम गर्दछ। यो प्रयास गर्नु भएकोमा धन्यवाद!
अधिक जानकारी | स Mac्केत मैकवर्ड
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » प्रदर्शन, तपाईंको हार्ड ड्राइव र भर्चुअल मेमोरी
मैले हिमचितुवालाई छिटो सुरू गर्ने आदेश पत्ता लगाए र यसले काम गर्दछ। अनुमति मर्मत जस्तै केहि गर्दछ वा मलाई सत्य के हो भनेर थाहा छैन, तर यसले १००% काम गर्दछ। तपाई गुगल चलाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ।
Sudo chown root: प्रशासन /
तर यो के हो !!!!!!! हे भगवान
मैले भर्खरै प्रयास गरें र तपाईले यो कस्तो देखिनुहुन्छ भनेर देख्नुहुन्न, तर त्यसो भए हामी किन भर्चुअल मेमोरी चाहन्छौ ?????
मसँग खुला प्रोग्रामहरू (समानान्तरहरू) को होस्ट र एक समान ल्यापटपमा अर्को प्रयोगकर्ता छ, यो शट जस्तै जान्छ
पोष्टको लागि अन्तिम धन्यवाद
PS: यो परिवर्तन केहि बकवास छैन?
IJoe लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो प्रश्न हो: यदि मैले त्यो प्यारामिटर परिवर्तन गरें भने, के यसले अझै शेरमा अद्यावधिक गर्ने काम गर्दछ (र फेरि यो पनि गर्ने छ), वा केही लोड गर्छु?
रिचीलाई जवाफ दिनुहोस्
यो वास्तवमै काम गर्दछ। विरोधाभास यो हो कि आदर्श प्रणालीमा यो पनि राम्रो नै हुँदैन: एसएसडी डिस्कसँग बढी सीमित पढ्ने / लेख्ने चक्र हुन्छ र SWAP मेमोरीले उनीहरूको जीवन चक्र काफी छोटा गर्दछ।
मकोटेकालाई जवाफ दिनुहोस्
जब म रिबुट गर्छु, के मैले यस आदेशलाई पुन: चलाउनु पर्छ?
EMancu लाई जवाफ दिनुहोस्
र ठूला फाईलहरूसँग काम गर्दै, के तपाईंलाई थाहा छ यदि त्यहाँ समस्याहरू छन् कि? उदाहरणका लागि लाइटरूम वा ps को साथ?
"ठूला" फाईलहरूको साथ मलाई तपाईको मतलब के हो भनेर थाहा छैन, तर RAWs जुन म लाइटरूममा सार्छु २ 25 Mb को आसपास हुनेछ र समस्याहरू बिना नै। ठूला फाईलहरूको लागि मैले अहिलेसम्म परीक्षणहरू गरिन।
यस समयमा मँ पहिले नै भन्दै छु र अधिक व्यक्तिहरु टिप्पणीमा भन्छन कि यो एक ठूलो खोज हो।
PS: सिंहको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्, किनकि शेर inside 99% हिउँ चितुवा भित्र छ, तिनीहरूले यसलाई बाहिरबाट परिवर्तन गरेका छन्।
म पुष्टि गर्न सक्छु कि शेरमा पनि यसले काम गर्दछ। म यसको प्रभावकारिताको बारेमा कुरा गर्न सक्दिन किनकि मैले यसलाई स्थापना गरेको केही समयमै गरेँ तर कम्तिमा मेरो लागि (मेरो MBP मा G Gb को साथ) यो फोटोशप, इलस्ट्रेटर, Xcode र अरूको साथ शट जस्तै हुन्छ। हार्ड ड्राइभले सायद यसलाई छुन्छ। 🙂
ठ्याक्कै मेरो मतलब त्यो नै थियो, २ 25 मेगाबाइट कच्चा शीतल।
मेरो हातमा भएको काम समाप्त हुने बित्तिकै, म यसलाई प्रयास गर्छु।
मलाई लाग्छ कि यदि रेकर्ड कम खेल्छ भने, ड्रमहरू केहि लामो समय सम्म रहन सक्छ? तिम्रो के बिचार छ?
ps: किन यो एप्पल संसारमा एक मात्र वेबसाईट हो जुन विषयको बारेमा कुरा गर्छ?
iJoe, तपाइँ सही हुन सक्नुहुनेछ, यो परीक्षणको कुरा हुनेछ यद्यपि यस्तो राम्रोसँग केहि परीक्षण गर्न सजिलो छैन।
म यस प्रकारको मुद्दा देख्छु: केहि बर्ष पहिले यो दुर्लभ थियो कि यसमा २ GB भन्दा बढी रैम थियो, चीजहरू त्यस्तै। त्यस समयमा डाटा सार्न स्व्यापफाइल आवश्यक थियो, तर अब सामान्य कुरा भनेको //2 जीबी र्याम हुनुपर्दछ, कम्तिमा म्याकमा। सम्भवतः यही कारणले एप्पलले हामीलाई यो प्रकार्य असक्षम पार्नका लागि बढी "हातैले" राखेका छन? म तपाईंलाई सम्झाउँछु कि यो चितुवामा काम गर्दैन, त्यहाँ अझै अर्को तरीका छ यसलाई गर्न तर यो सरल छैन।
खैर, यो शेरमा काम गर्ने राम्रो छ, मैले देव पूर्वावलोकन फ्ल्यास ड्राइभमा स्थापना गरेको थिएँ तर मैले गल्तिले मेटायो: /
जोस, जब तपाईं परीक्षा गर्नुहुन्छ, मलाई भन्नुहोस्। म सन्दर्भ को लागी एक MB कोर २ डुओ (2०० २०० late) को GB GB रमको साथ शूट गर्दछु।
र एउटा कुरा, के कसैले खाली स्थानमा हेरेको छ कि खाली गरिएको छ?
मेरो केसमा, कमान्ड गरेको समयमा कूल कुल 3,8.. XNUMX. जीबी। मैले कुनै पनि कुरा भन्दा जिज्ञासालाई बाहिर हेरेँ।
जे भए पनि, हामी साहसी छौ तर यस समयमा हामी राम्रो गर्दैछौं ... मान्छेले आफ्ना छापहरू जारी राख्दछन् कि भनेर हेरौं र यी दिनहरू मध्ये एक म प्रगतिमा टिप्पणी दिन एक प्रविष्टि गर्नेछु।
त्यसोभए आँखाबाट, फोटोशप बढी वा कम -०-60०% छिटो सुरू हुन्छ, र विश्वास गर्नुहोस् मैले यो नोटिस गरें किनभने म हरेक दिन PS संग काम गर्छु।
यो पहिले नै सेट गरिएको छ। छिटो हो, तर दोस्रो पटक तपाईले अनुप्रयोग खोल्नुभयो भने पहिलो पटक समान समय लिन्छ। मैले अहिलेसम्म काम गर्ने कोशिश गरेको छैन, मात्र अनुप्रयोगहरू खोल्न र बन्द गर्दै। र हो, यो केहि छिटो देखिन्छ, यद्यपि म निश्चित छु कि म यो अधिक याद गर्दछु जब मैले केहि घण्टा सम्म चीजहरू खोल्न र बन्द गर्दैछु।
म तपाईंलाई सूचित गर्दछु
PD अमूल्य डिस्क बचत
साथीहरु, पहिलो नकारात्मक अनुभव।
क्यालिबर, लाइटरूम (प्रोसेसिंग) र फोटोशप खुल्ला साथ म राम्राको बाहिर चलाएको छु (निश्चित रूपमा केहि थप बाहेक, अवश्य पनि) र यो एक मिनेटको लागि ढिलो भयो।
सबै कुरा राम्रो हुन सक्दैन ...
समस्याहरू, LR 3.4 कुनै चीजमा अडिदैन जुन तपाईंले यसलाई बेंसी दिनुहुन्छ र मात्र LR काम गरेर।
म हैक बिना कोसिस गर्दछ यदि मामला मा केहि थियो
आभासको लागि फोटोशप जहिले पनि हार्ड ड्राइव आफैंले तान्छ।
भर्चुअल पीएसको लागि मैले सँधै बाह्य HD प्रयोग गरें FW800 र सबै चीजको लागि आन्तरिक।
मसँग यो स्नो लियोपार्डमा थियो र यसले पूर्ण रूपमा काम गर्यो, म चार दिनदेखि लायन जीएमसँग छु र म यो गर्ने हिम्मत गरेन किनकि मलाई थाहा थिएन कि यसले काम गर्दछ वा गर्दैन।
भोलि टाइम क्याप्सुल र र्याम निस्क्रिय पार्नुहोस्।
र्याम र एचडी, जस्तै LR र PS को साथ दुबै गाह्रो अनुप्रयोगहरूमा अलिकता अड्कनु सामान्य हो, किनकि दुबै भर्चुअल हो वा हो को लागी HD तान्छन्, सबै स्रोतहरू "खान" थप गर्नुको साथै, म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छु बन्द गर्न। LR PS खोल्न अघि र उल्टो।
नमस्कार, हिमचितुवामा यसले उत्तम काम गरे तर मैले सिंह स्थापना गरें र टर्मिनलमा मैले यो त्रुटि पाएँ।
प्रक्षेपण: अनलोड गर्नमा त्रुटि: com.apple.dynamic_pager
मलाई थाहा छैन के गर्ने, मद्दत गर्नुहोस्
एलोन्सो हर्नान्डेज प्लेसहोल्डर छवि भन्यो
LION स्थापना गर्नुहोस् र म त्रुटि लिजेन्ड प्राप्त गर्दछु जुन म बुझ्दिनु:
"Launchctl: लोड भइरहेको त्रुटि: com.apple.dynamic_pager"
कृपया मलाई तपाईको सहयोग चाहिन्छ
एलोन्सो हर्नान्डेजलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते, यो माभेरिकमा गर्न सकिन्छ, मसँग g जीबीकोaजीबीको साथ २०११ एमबीपी छ, यो राम्रो हुँदैन र?
Jaf लाई जवाफ दिनुहोस्